(Manchester) 02 Luuliyo 2020. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa iska diiday warar sheegaya in Jadon Sancho uu markale dib ugu soo laabanayo Sky Blues.
Da’ayarka reer England oo haatan qaab ciyaareed wanaagsan ku sameynaya kooxda Borussia Dortmund ayaa wuxuu soo jiiday indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub, oo ay ugu horeyso Manchester United.
Jadon Sancho ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda Manchester City saddex sano kahor, wuxuuna go’aansaday inuu ku biro naadiga reer Germany ee Borussia Dortmund oo hibadiisa uu ku soo bandhigay, isaga oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 20 gool tartamada kala duwan, wuxuuna sidoo kale caawiyay 20 gool.
Haddaba macalinka reer Spain ayaa wuxuu cadeeyay in Jadon Sancho uusan ku fikireyn xilligan dib ugu soo laabashada garoonka Etihad gabi ahaanba, isagoo go’aansaday inuu baxo si uu guulo ugu soo gaaro meel ka baxsan kooxda, isdaas darteed aysan macquul aheyn xilligan inuu dib u soo laabto.
Wargeuska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu daaha ka qaaday wareysi uu bixiyay Pep Guardiola, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Sancho wuxuu go’aansaday inuu baxo, marka muxuu u doonayaa inuu soo laabto?”.
“Markii uu go’aansaday inuu u wareego Borussia Dortmund, sababtu ma aheyn inuu doonayay halkaan inuu ku soo laabto labo sano kaddib, ma uusan dooneynin inuu la sii joogo Manchester City, sidaas darteed isagu ma uusan dooneynin inuu soo laabto”.